China 30ml 60ml 120ml oqondile emaceleni amber ingilazi ubuso ukhilimu jar nge white metal lid Ukukhiqiza futhi Factory | I-Easypack
I-30ml 60ml 120ml amber glass jar enesembozo yenziwe nge-amber glass yangempela. Ingilazi ye-Amber yenziwa ngale ndlela ngaphandle kokufafaza inhlaka. Ubuhle bengilazi ye-amber ukuthi buhlinzeka ngokuvikelwa okuncane kwe-UV, okuwusizo kakhulu lapho kugcinwa izinto ezizwela ukukhanya. Kuhambisana nesembozo esimnyama se-urea, kunikeza isisombululo esiphelele esingagcini nje ngokuhlobisa kepha futhi siyasebenza.
Imbiza yengilazi engu-30ml 60ml 120ml enesembozo ilungele imikhiqizo yasendlini njengokhilimu, amabhalsamu, insipho, izimpushana, izimonyo, amaski, amakha kanye nokokuthambisa, njll. Ingilazi ye-Amber isiza ukuhlunga imisebe ye-ultraviolet futhi isiza ukunweba impilo yeshalofu yomkhiqizo. Lokhu futhi kusiza ukukhulisa inzuzo, ngoba imikhiqizo yakho izohlala ihlanzekile isikhathi eside.
I-Easypack Glassware ivumela wonke amakhasimende uku-oda amasampula wamahhala. Uma udinga ngempela ukupakisha kwethu ngobuningi, sizokunikeza ngokuzenzekelayo isaphulelo esikhulu esigabeni sokuphuma. Sincoma ukuthi wonke amakhasimende enze ukuhlolwa komkhiqizo ngaphambi kokufaka i-oda. Lokhu kuqinisekisa ukuthi i-glassware yethu ingahlangabezana nezidingo zakho ngaphambi kokwenza utshalomali olukhulu. Uma unemibuzo ethile mayelana nemikhiqizo yethu, sicela uxhumane nathi mahhala!
Amandla angama-30ml, 60ml, 120ml
Yenziwe ngengilazi ye-amber yangempela.
Ingilazi ye-Amber inikeza ukuvikelwa okulinganiselwe kwe-UV.
Ungathenga imbiza yengilazi ecacile enesembozo lapha.
Sinezinhlobonhlobo zamasayizi namajamo atholakalayo.
I-MOQ ingama-PCS ayi-5 000
Izaphulelo ezinkulu kuma-oda amaningi.
Kufakwa ilebula ebhodleleni.
Langaphambilini 1oz 2oz 4oz cobalt okwesibhakabhaka ingilazi yezimonyo ukhilimu imbiza nge black plastic lid
Olandelayo: 8oz 240ml emaceleni emaceleni ingilazi ikhandlela jar nge black cap plastic
I-Eye Cream Glass Jar
Iziqukathi Zengilazi Zokhilimu
Izimonyo Zengilazi Cream Jars
Izimbiza Zengilazi Zokhilimu
I-Hinds Honey And Almond Cream Glass Bottle
100g 100ml ecwebezelayo umbala omnyama gl iqonde emaceleni ...
1oz 2oz 4oz ayibe ingilazi eluhlaza okwesibhakabhaka ukhilimu yezimonyo ja ...
Glass Bottle Nge Spray Pump, Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha, Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo,